कञ्चनपुर प्रहरीद्धारा तपाईको मास्क खै ? र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ५४ व्यापारीलाई जरिवाना - Mahendranagar Post
Home आन्तरिक मामिला कञ्चनपुर प्रहरीद्धारा तपाईको मास्क खै ? र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ५४ व्यापारीलाई...
कञ्चनपुर प्रहरीद्धारा तपाईको मास्क खै ? र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ५४ व्यापारीलाई जरिवाना
कञ्चनपुर-ईलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले तपार्इको मास्क खै ? कार्यक्रम र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ५४ वटा व्यापारीलाई जरिवाना गरेको छ। ती व्यपारीहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना नगरी आदेश उलंघन गरेकोमा ईलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले जरिवाना गरेको हो। प्रहरीले ५४ जना व्यापारीलाई ५० रुपैयाका दरले २७ सय जरिवाना गराएको छ।
प्रहरी टोलीले मास्क समेत वितरण गर्नुका साथै २६० जनालाई सम्झाई बुझाई गरि छोडेको छ। आदेश उलंघन गरि चलाउने चार पांग्रे २० वटा तिन पाँग्रे २४ वाट दुई पाँग्रे ३० गरी जम्मा ७४ वटा सवारी साधन हरुलाई होल्ड गरी सम्झाई बुझाई गरी छोडिएको जनाईएको छ।
Previous articleयी हुन् कोरोनासँग लड्ने क्षमताको विकासका लागि खानेकुराहरु !
Next articleमाओवादी केन्द्रले फिर्ता लियो ओली सरकारलाई दिएको समर्थन, सरकार अल्पमतमा